के भगवान श्रीकृष्णका साच्चै १६,००० पत्नी थिए त ? यस्तो छ रहस्य जानी राखौ
अगस्ट 28, 2019 अगस्ट 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments पत्नी, भगवान, श्रीकृष्ण
भगवान श्रीकृष्ण हिन्दू धर्मशास्त्रका अनुसार भगवान विष्णुको १० मुख्य अवतारहरूमध्यको एक अवतार मानिन्छन् । भगवान श्री कृष्णको जन्म आधुनिक भारतको मथुरा शहरमा भएको थियो । श्रीकृष्णलाई जन्मिएकै घडी कंशबाट बचाउन उनका पिता वसुदेवले गोकुलवासी नन्द गोपका घरमा छोडेका थिए । त्यसैले श्रीकृष्णको बाल्यकाल नन्द गोपका घरमा बितेकोले उनलाई गोपाल तथा नन्दलाल नामले पनि जानिन्छ ।
मुर दैत्यको वध भएको खबर पाएपछि भौमासुर आफ्ना सेनापति तथा दैत्यहरूको सेनालाई साथ लिएर युद्ध गर्न आयो । भौमासुरलाई स्त्रीको हातबाट मर्ने श्राप थियो । त्यसैले भगवानले सत्यभामालाई सारथी बनाउनुभयो र घोर युद्धपछि अन्त्यमा उहाँले सत्यभामाको सहयोगमा उसको वध गरिदिनुभयो।
यसरी भौमासुरलाई श्रीकृष्णले मारेपछि उसको पुत्र भगदत्तलाई अभयदान दिएर उसलाई प्राग्ज्योतिषको राजा बनाउनुभयो। भौमासुरले अपहरण गरेर राखेका १६,००० कन्यालाई उहाँले मुक्त गरिदिनुभयो । ती अपहृत नारीहरूलाई तत्कालीन समाजले स्वीकार नगर्ने भएकाले श्रीकृष्णले उनीहरूलाई पत्नी रूपमा स्वीकार गर्नुभयो । यसरी उहाँका ८ पटरानीका अलावा १६ हजार पत्नी भए ।
← स्वास्थ्यको लागि खीर खानुका फाइदाहरु
औषधि भनेको के हो ? →
नोभेम्बर 26, 2016 जनवरी 26, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
3 thoughts on “के भगवान श्रीकृष्णका साच्चै १६,००० पत्नी थिए त ? यस्तो छ रहस्य”
Pingback:यी हुन् भगवान कृष्णबारे जान्नैपर्ने ८ रहस्यहरु, गर्नुहोस् एकपटक मनन
Pingback:यस्ता छन् जीवनमा सुखी रहन ध्यान दिनुपर्ने भगवान श्रीकृष्णका ५ कुराहरु, जानी राखौ